'Sequía' waa taxane cusub oo TVE ah oo wajiyo caan ah lagu yaqaan | Bezzia
'Sequía' waa taxanaha cusub ee TVE oo leh wajiyo caan ah
Susana godoy | 01/06/2021 14:00 | Wararka
'Abaarta' durba waa xaqiiqo TVE. Xaaladdan oo kale, ma aha dhufto ee aan inta badan ka hadalno, ee noo soo bandhigaya warar xiiso leh. Waxay umuuqataa in kanaalada caadiga ah ay sidoo kale sharad ku yihiin sheekooyinka iyo kiiskan gacanta jilayaasha caanka ah iyo Isbaanishka.
Wixii ay u muuqato inay ku yeelan doonto soo dhaweyn wanaagsan iyo wixii ka sarreeya, dooddeeda ah inay sida xaqiiqada ah saameyn ku yeelan doonto weligeed. Waa sheeko xiiso leh, marka sirtu waxay noqon doontaa dhinaceena laakiin mawduucyo dheeri ah ayaa lagu dari doonaa kuwa aan marwalba jecel nahay inaan ogaanno. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
1 Waa maxay dhagarta 'Abaarta'
2 Meelaha aan ku arki doonno taxanaha
3 Waa maxay jilayaasha taxanaha ah?
Waa maxay dhagarta 'Abaarta'
Waxaan ku bilaabaynaa inaan ogaanno waxa aan ka helayno silsiladan cusub ee TVE iyadoo lala kaashanayo telefishanka Boortaqiiska. Hagaag, sidaan uhorukacnay, waa sheeko xiiso leh taas wuxuu ku bilaabanayaa qarsoodi weyn oo aan xal loo helin oo magaalo ah. Meeshani waxay aragtay sida abaaruhu u galeen. Laakiin iyada dardeed ayaa ah laba meyd oo ay ku yaalaan dhaawacyo rasaaseed oo halkaa yaallay muddo dheer. Wixii intaa ka dambeeya, booliska ayaa mas'uul ka ah isku dayga xallinta fal-dambiyeedkan.
Marka la aqoonsado aqoonsiga dhibbanayaasha, laba qoys ayaa waddooyin ka tallaaba in kastoo aysan isku meel ka soo wada jeedin. Laakiin tani waxay dhalin doontaa sir badan iyo xiriiro qarsoon si ay u muuqdaan. Laakiin waa intaas marka lagu daro waxaan raadineynaa khiyaanooyin, jaceyl iyo hammi badan. Marka si guud loo hadlo, waxaan horeyba u helnay soo koobid wax kasta oo 'Abaar' ka dhigi doonta mid ka mid ah taxanaha cusub ee aad ku mashquulsantahay, xaqiiqdii. Hadda, duubista filimku way bilaabmaysaa, markaa waa inaan in yar sugno.
Meelaha aan ku arki doonno taxanaha
Xaqiiqdii meelaha qaar duubista filimka ayaa kugu noqon doona wax aad u taqaano, maxaa yeelay waxaa la dhahaa taas duubista ayaa ka bilaaban doonta meelaha Cáceres, iyo sidoo kale Madrid. Laakiin sidaan horay u soo sheegnay inay ahayd wada shaqeyn la leh telefishinka Burtuqiiska, waa in la sheegaa in meelaha Lisbon ama Cascais ay sidoo kale noqon doonaan tallaallo waaweyn, sida lagu muujiyay VerTele! Marka, kaliya markaan garano xogtaan, waxaan ogaanay inay waxbadan balanqaadeyso, maxaa yeelay goobaha sidoo kale waxay leeyihiin soojiidasho weyn iyo in kudhowaad dooda horeyba wax badan ayey iskaga oran kartaa.
Waa maxay jilayaasha taxanaha ah?
Dhinaca aan ka helno Rodolfo Sancho, oo aan dhamaanteen u naqaano inaan ku bilaabay taxanaha sida 'Al leave class' oo ku soo korortay kuwa kale sida 'Amar xilliyadii dhibku jiray', 'Isabel' ama 'Wasaaraddii waqtiga', iyo kuwo kale oo badan. Waxaa ku xiga Aktarada Sawirka meeleynta Elena Rivera waxaan ku aragnay iyada 'Servir y Protecte', 'La Truth' ama 'Inés del alma mía'. Miryam Gallego waa magac kale oo sidoo kale ka dhex muuqda halyeeyada taxanaha TVE. Labadaba 'Saxafiyiinta' iyo 'Red Eagle' ama 'Sirta Gobolka' ayaa waliba lahaa.
Marka sidaan aragno jilayaasha waaweyn waxaa ka buuxa xiddigo waaweyn, iyagoon ilaawin Miguel Angel Muñoz inaan ka xasuusano 'Talaabo horay loo qaaday' ama 'Ulysses Syndrome', iyo kuwo kale. Dhiniciisa waxaan sidoo kale arki doonnaa Juan Gea, oo xirfad dheer ku leh telefishanka iyo adduunka shineemo iyo xitaa adduunka tiyaatarka oo leh shaqooyin badan. Aktarada Bortuqiiska Margarita Marinho iyo jilaaga Guilherme Filipe iyaguna way ku biiraan jilayaasha. Maaddaama duubisteeda ay hadda bilaabmayso bilowga xagaaga, xilligan ma jiraan xog dheeri ah oo ku saabsan taxanaha. Laakiin waxaan rajeyneynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu raaxeysan doono dhamaan jilaayaashan iyo atirishooyinka shaashada yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » 'Sequía' waa taxanaha cusub ee TVE oo leh wajiyo caan ah
Faa'iidooyinka wareejinta caafimaadka